जेन अस्टेनका ‘हिरोइन’ हरू – AayoMail
नेपालगन्जको चुनावी रथ हाँकेका डा. सुरेश कनोडिया
जेन अस्टेनका ‘हिरोइन’ हरू
आयाेमेल संवाददाता २०७७ जेठ २० गते १३:४८
लामो, एकताबद्ध हिँडाइ, बेलुकीपखको पारिवारिक भोजन। जीवन कहिले परिवर्तन हुन्छ भनेर अचम्म मान्दै बिताएका दिनहरू।
कहिले अध्ययन गर्दै कम्प्युटर अनि मोबाइलको स्क्रिनमा आएका विषय तलमाथि सार्दै त कहिले पुराना यादहरूको रमाइलो सम्झना गरेर शान्त मनोरन्जनमा बिताएका साझँहरू।
यिनै हुन् अहिलेको एकान्तबासको दैनिकी।
तर केही शताब्दीलाई लिनुहोस् वा दिनुहोस् । केही सामाजिक सन्जालका एप्सहरूलाई लिनुहोस् अनि केही नागरिक अधिकारभन्दा बढी लिनुहोस्।
म जेन अस्टेनका नायिकाहरूको दिनको बयान गर्दै छु।
उन्नाइसौं शताब्दीको महिलाहरूको गम्भीर जीवन र अहिलेको परिस्थितिबीच एउटा अचम्मको सान्त्वना प्रतिध्वनि छ ।
हामीमध्ये कति भाग्यशाली छौं, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको घर बस्न सामना गर्नु नै रहेछ।
हाम्रो इडाहो सहरमा परिवारको साथ मेरो पहिलो ५० दिनको एकान्तबासमा मैले जेन अस्टेनको उपन्यासहरू मात्र पढें।
र, मैले ती सबै पढें। पुरानो जमानाका भाषा, नियमहरू र तीव्र रोमान्टिक कमेडीहरूको अनुमानित सुखद अन्त्यले स्थिरता प्रदान गर्यो। त्यसले मलाई सुरक्षित र राम्रो रहन विशेषाधिकार दियो।
तर अरु धेरै सीमित वास्तविकताका साथ आउँदा मलाई पनि केही हदसम्म अप्ठेरो लाग्यो । २१औं शताब्दीमा जीवनको सन्तोषजनक गतिबाट अलग भएँ।
अस्टेनका पात्रहरूले दाबी गर्नसक्ने भन्दा बढी, मेरो पेशाको छनोटसहित म धेरै स्वतन्त्रताबाट लाभ लिन्छु।
तर जति धेरै मैले आफूलाई पर्शुएसनको मधुर स्वभाव एनी इलियट, सेन्स एन्ड सेन्सिबिलिटीको विचारशील एलिनोर ड्यासवुड र साथी नायकहरूको संसारमा डुबाएँ, त्यति नै मैले एक अप्रत्यासित सम्बन्ध भएको पाएँ।
अरुले राखेका प्रतिबन्धहरू (पुरुष) लाई हेर्दा रेजेन्सी इंल्यान्डमा निश्चित वर्गको महिला हुनु सामाजिक रूपले पूर्वनिर्धारित भएर टाढा हुनुपर्ने थियो।
देशको छेउमा अलग रहनु अनि ऋतुहरूको गतिमा जीवन बिताउनुपथ्र्यो। सीमित हुनुको कारण अलग राख्नुहोस् । हामी एक परिभाषित सामान्यतः बाँकी छौं जस्तो कि घरमा हाम्रा दिनहरू भर्न आवश्यक।
एक नोकरजस्तै व्यवहार गरिएको मेन्सफिल्ड पार्कका फ्यानी पार्कलाई लिनुहोस्। भाग्ने कुनै अवसर नभएपछि फ्यानी उनको धैर्यमा धेरै भरोसा गर्छिन्। जबकि उनका भान्जाभाइहरूले रोमान्सको खोजी गर्छन्। उनी आफ्ना काकीलाई सहयोग गर्छिन् एक शोषित साथीको रूपमा अनि गम्भीर मौनता र लगातार टिप्पणीको निशानाका रुपमा।
यदि फ्यानी दयालु र कम योग्य आफन्तहरूलाई राम्रोसँग क्षमादिन सक्छिन् । त्यो एक नम्र उदाहरण हो, जसले भर्खरमात्र टिभी ठिक गर्न सोध्दा चुप लाग्न भनेको थियो। मुटुमा, अस्टेनका नायिकाहरू होमबडी हुन्, जो गहिरो रूपमा जोडिएको छ (पूर्वनिर्धारित, सायद)। उनीहरूको परिवार र स्थानहरूमा उनीहरूको लगातार उदास चालहरूमा।
आफ्नो खराब स्वास्थ्यसमेत नहेरी उनले आफ्नी भतिजीलाई यस्तो लेखिन्, ‘बिरामी भनेको मेरो जीवनको समयमा खतरनाक लत हो।’
एम्मा वुडहाउस आफ्ना बुवा र उनीहरूको सम्पत्तिप्रति यति प्रतिबद्ध छिन् कि उनी आफ्नो भावी पतिलाई भित्र जान राजी गर्छिन्।
ड्यासवुड बहिनीहरू, यद्यपि उनीहरूको बुवाको मृत्युपछि सानो कुटीमा सर्न बाध्य भए, त्यहाँ खुशी खोज्न। संसारमा कुनै प्रतिष्ठा छ, मारियानले नजिकैको क्षेत्रहरूमा हिँड्ने बेलामा सोध्छिन्, योभन्दा श्रेष्ठ ?
उनको परिवारको अनिश्चित वित्तका लागि धन्यवाद, अस्टेन आफैं प्रायः हिँड्दै आफन्तहरूको उदारतामा भर परेकी थिइन्। आफ्नो जीवनको अन्तिम वर्षमा उनी स्यान्डिटनमा काम गर्दै थिइन्। उनी बिरामी परेका बेला एक युवती समुद्र किनारमा एक परिवारलाई भेट्न जाँदै थिइन्।
केही महिना पछि उहाँ बित्नुभयो र स्यान्डिटनको ठूलो हिस्सा लेख्न छोड्नुभयो। तैपनि, सामाजिक पर्वतारोही र यात्रुहरूको एक झगडा टेकडाउनको रूपमा यो उनको सबैभन्दा तीव्र सामाजिक आलोचना हो। यसले घरमा रहन नसक्ने असन्तुष्टहरूका लागि इशारा गर्यो, एक बिलासिता जुन उनी सधैं वहन गर्न सक्दैनन्।
कुनै एकल स्थानमा पुनः सिक्नु यो अनौठो कुरा हुनसक्छ। यो कुरालाई मान्नका लागि हाम्रो आधुनिक ट्रान्जियन्स जस्तो घर सर्नु, बिदा लिनु, डिस्को बारहरूमा अपरिचित व्यक्तिहरूसँग मिसिनु, जुन कहीं न कहीं हालसालैको विशेषाधिकार हो।
यस वर्षअघि मैले हाम्रो पोर्चबाट ढिलोगरी हिउँ झरेको कत्ति पनि याद गरेको थिइनँ वा कटनवुड रूखहरू वसन्तमा अनौठो हरियालीमा परिणत भएको देखें।
म वर्षहरूमा हरेक रात उही व्यक्तिहरूसँग डिनर बस्न खोजिनँ। एक साताका लागि पनि घरमा पकाउने खानाको योजनामा सहयोग गरिनँ। चिठीहरू लेखिएवापत कतै जानका लागि पिउने पेस गरिनँ। चिजहरू उस्तै हुनुपर्दैन, तर म स्विकार्न सक्छु कि यी खुशी पनि हुन्, यस्ता साधारण घरेलु आनन्द जुन अस्टेनका ‘हिरोइन’हरुले जान्दछन् र राम्ररी बुझेका छन्।
टाइम डटकमबाट अनुवाद
पहिचानका लागि संघर्ष गर्नेहरूको कथा ‘ढकियामे नागरिकता’
काठमाडौं आइपुगे राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक दासानायके
गायिका रुशाली भट्टराईको ‘गुराँसको पछ्यौरी’ सार्वजनिक
फेरि सर्‍यो ‘चपली हाइट’ को रिलिज मिति
नेपाली फिल्म ‘चुरीफुरी’ हलमा रिलिज
हाउसफूल हुँदै सिनेमा हल
कला र हेमन्तको ‘किन झस्कियौ’